SRWare Iron vs Chromium / Chrome | Laga soo bilaabo Linux
Isticmaalka sare ee noocyadii ugu dambeeyay ee Firefox waxay igu qasbeen inaan isticmaalo chromium, taas oo ah wax laga xishoodo, maxaa yeelay wax badan ayaan isaga aqoonsadaa Browser Mozilla ka badan tan Google.
Maxaa ka qaldan Google? Hagaag, waxay si badheedh ah u xad gudubtaa asturnaantayada iyadoo aanaan awoodi karin inaanu waxba qabano haba yaraatee. Taasi waa sababta Mashruuca BirW SRWare, fargeeto ah chromium taasi waxay naga caawinaysaa inaan ilaalino macluumaadkeena .. Sidee? Eeg jadwalka isbarbardhiga ee soo socda ee u dhexeeya midka iyo kan kale.
Isbarbardhiga Iron y Chrome arrimaha asturnaanta:
Dhibaato Chrome Iron
Rakibaadda-Aqoonsiga Nuqul kasta oo ka mid ah Google Chrome waxaa ku jira lambar rakibid ah oo loo diri doono Google ka dib rakibidda iyo isticmaalka ugu horreeya. Waxay nadiifineysaa mar haddii Chrome ay hubiso cusbooneysiinta markii ugu horreysay. Haddii Chrome uu qayb ka yahay olole xayeysiin ah, wuxuu kaloo abuuri karaa lambar dhiirrigelin ah oo loo diro Google ka dib isticmaalkiisii ​​ugu horreeyay. Majiro Birta.
Talooyin Waxay kuxirantahay qaabeynta, markasta oo aad wax ku qoratid baarka cinwaanka, macluumaadkan waxaa loo dirayaa Google si ay uga bixiso talo soo jeedin ku saabsan raadintaada. Majiro Birta.
Bogagga Cilad Kale Waxay kuxirantahay qaabeynta, hadaad ku qorto cinwaan been ah cinwaanka bar, waxaa loo dirayaa Google waxaadna kaheleysaa fariin qalad ah serverka Google. Majiro Birta.
Warbixinta Cayayaanka Waxay kuxirantahay qaabeynta, faahfaahinta ku saabsan shilalka biraawsarka ama shilalka waxaa loo diraa serverka Google. Majiro Birta.
RLZ Tracker Muuqaalkan Chrome wuxuu u gudbiyaa macluumaadka sirta ah noocyadiisa kala duwan Google, sida goorta iyo meesha laga soo dejiyey Chrome. Majiro Birta.
Cusbooneysiiyaha Google Chrome waxay rakibtaa cusbooneysiiyaha, kaasoo markasta ku raran gadaal gadaashiisa. Majiro Birta.
URL guurguuraha Loogu yeerayo waxay kuxirantahay dejinta, shan ilbidhiqsi kadib markaad bilowdo bogga hoyga Google wuxuu ka furayaa asalka. Majiro Birta.
Kala duwanaanshaha kale ee muhiimka ah:
Xayeysiiska Xayeysiiska Chrome ma laha xayeysiis xayeysiis ah oo la dhisay. Birtu waxay leedahay adeegsi fudud oo la adeegsado, xayeysiis xayeysiis ah oo lagu rakibay hal fayl.
Wakiilka isticmaale Wakiilka Isticmaalaha Chrome waxaa kaliya lagu beddeli karaa halbeegyada isku xidhka ama amarka, oo aan ku habboonayn isticmaalka joogtada ah. Wakiilka Isticmaalaha Birtu wuxuu noqon karaa mid jilicsan oo si joogto ah loogu qaabeyn karaa faylka "UA.ini".
Cunto yar yar Chrome kaliya wuxuu ku leeyahay 8 thumbnails bogga "Tab Cusub". Iron waxay ku siineysaa 12 thumbnails si aad uga faa'iidaysato inta badan booska laga heli karo kormeerahaaga.
Marka sababahan oo dhan, waxaan isticmaali doonaa SRWare Bir hada kadib. Waxyaabaha xun ayaa ah inaanan ku hayn doonin meelaha aan ku keydiyo oo aan ku cusbooneysiiyo gacanta, laakiin ma ahan wax ilmada ka soo burqanaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » SRWare Iron vs Chromium / Chrome
37 faallooyin, ka tag taada
Taas ma aanan ogeyn, mahadsanidiin macluumaadka, waxaan rabaa inaan rakibo kaliya markaan dhameeyo rakibida feylka mahadnaquna waa xog muhiim ah.
Ku jawaab fredy
Runtu waxay tahay anigu ma aanan maqal magaceeda, waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo, waan arki doonaa haddii aan helo meesha aan ka soo dejisto, link-ga aad ku dhejisay wuxuu ii sheegayaa "Fasax uma lihid adeegaan".
Goor dhow waxaan ku siinayaa xiriirin aad ku soo dejiso .. Ha ka welwelin 😀
Hore ayaan u helay;http://www.srware.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=2796
Ma waxay ku timaadaa Isbaanish ama Ingiriis kaliya?
Waxay ila tahay inaad luqadda u beddeli karto Isbaanish
Waa biraawsar aad u wanaagsan, muddo sanad ah ayaan istcimaalay waligiisna igama wicin
Diyaar u ah rakibida iyo shaqeynta, mahadsanid macluumaadka.
Waa lagusoo dhaweynayaa nin .. 😀
Laakiin su'aal ayaa soo baxaysa: Haddaba maxay Chromium ku sameysaa meelaha lagu keydiyo debiga, haddii ay macluumaadkaas oo dhan u dirto google? Waxaan u arkaa inay tani ka hor imaaneyso sharciyada debian-ka ...
Su'aal aad u wanaagsan ... Waa inaad ka heshaa macluumaad ku saabsan ..
Waxaan u maleynayaa in Chromium lagu jahwareersan yahay Chrome, inta aan ogahay oo aan fahansanahay in midka gudbiya asturnaanta ee dahaarka uu yahay Chrome ma aha Chromium ..
Jawaab Ciise Ballesteros
Dante 696 dijo
Ma noqon doonto wax la yaab leh, in nooca Chromium ee ku jira keydkiisa, uu yahay nooc wax laga beddelay si looga fogaado xaaladdan oo kale. Isla wax la mid ah ayaa ku dhacay Firefox bilowgii, taas oo horseeday abuuritaanka mashruuca Iceweasel iyadoo ay isku dhaceen Mozilla.
Ku jawaab Dante 696
Waa wax laga walwalo illaa xadka isticmaalka webka (ama tiknoolajiyad kasta oo isgaarsiineed, oo ay ku jiraan taleefanka, tusaale ahaan) lala socdo, guud ahaan (laakiin aan si gaar ah u ahayn) ujeedooyinka suuqa. Waxaan badanaa ku daraa fidinta daalacayaasha xayiraya adons adons iyo qoraallada ururiya macluumaadka isticmaalaha. Mararka qaarkood bogaggu waxay noqdaan kuwo aan la-raadin karin waxaadna ogaaneysaa baaxadda basaasnimada qarsoon ee jirta. Looma baahna in laga sheego shabakadaha bulshada, laakiin si kastaba ha noqotee.
Mana aha inay ku xad gudbayaan asturnaanta dadka isticmaala shaqsi ahaan (in kasta oo ay in yar ka yar yihiin iyaguna sidaas bay yeelaan), laakiin waa inay ku xad gudbaan asturnaanta kooxaha (dadka) hoos loogu dhigay suuqyada iyo walxaha macaamiisha.
Birtu ma la jaan qaadi kartaa chrome / chroium kordhinta?
Haa, waa la taageeray. Waad ku dhejin kartaa fidinta, codsiyada iyo mawduucyada 'Chrome Web Store' dhibaato la'aan, in kasta oo biraawsarku kaa qaadayo meel kale adoo adeegsanaya.
Ku jawaab gadi
Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada.
elav, saaxiib, ma heshay sida loo qaabeeyo Wakiilka Isticmaalaha Birta?
Hahaha maya, laakiin wakhti yar kadib waan helayaa taas.
Ka waran xayeysiis xayeysiis ah, ma ii sheegi kartaa sida aan u qaabeyn karo?
Hada waxaan adeegsadaa kordhinta Adblock.
Ku jawaab pawcn
Muddo dheer ayaan isticmaalayay mana doonayo inaan beddelo, waa uun wacdaro
Waxyaabaha xun ayaa ah inaanan ku hayn doonin meelaha aan ku keydiyo oo aan ku cusbooneysiiyo gacanta, laakiin ma ahan wax ilmada ka soo burqanaya.
Macluumaadka waa la qadarinayaa, laakiin kuwa naga mid ah ee aan aqoon sida loo cusbooneysiiyo gacanta, tani waa wax naga ilmeysiinaya.
Markii aan dhaho cusbooneysiin gacanta, waxaan ula jeedaa soo degso xirmada .deb, fur terminal oo dhig:
Ma jiraan wax murugsan
Heh heh, waan ka xumahay xanaaqayga, Elav. Mahadsanid.
birta lagu dhaarsho waxay ku jirtaa keydka rasmiga ah ee debian, laanta qaarkood?
Cajiib! Aad baad ugu mahadsantahay wadaagida biraawsarkan, duul! Runtii waan ogaanayaa faraqa Firefox iyo Chromium laftiisa.
Damn ... hadda waan xiiseynayaa, waxaan rabaa sidoo kale inaan isku dayo HAHAHAHA
Runtu waxay tahay inaanan rakibin kahor maxaa yeelay markaan maqlay waxa jiray nooc kaliya oo loogu talagalay nidaamyada hawlgabka (windows. *) Laakiin hadda waxaan soo dajinayaa si aan u arko sida ...
Ku jawaab darzee
Huu, taas ma aanan ogeyn, laakiin sida qajaar madaxbanaan u danaynaynin kheyraadka ay dawacadu cunayso, weli aamin baan ahay 😀
Waad ku mahadsantahay xogta.
Hagaag, horeyba waa loo cadeeyay. Tijaabiyey oo la joojiyey 24 saac kadib. Ma aqaano inay tahay codsigeyga, OS-kayga (Linux Mint) ama naftayda laakiin way sudhan tahay (waxay noqon doontaa windosero ...), way is xirtaa wayna iga careysiisaa wax badan maxaa yeelay xitaa ma soo ceshanayso tabs markii aad mar kale fur.
Marka, maadaama ay jiraan waxyaabo kale oo badan oo aanan haysan waqti aan ku maaweeliyo naftayda xallinta, waan sii wadi doonaa isticmaalka Midori, Chromium iyo Firefox (ea, waxay noqon doontaa daalacayaal kumbuyuutarkeyga).
Suurtagal ma tahay in lagu rakibo archlinux iyada oo aan laga fujinaynin chrome?
Salu2 waadna mahadsantahay
Haa, waad wada yeelan kartaa labadaba isku waqti. Salaan.
Cidina Iron ma isticmaasho mar dambe ????, nuqulkii ugu horreeyay ee aan bixiyay wuxuu ahaa 20, ufff, runtii dhakhso badan ... hadda waxaan joogaa 21 hehe ...
Jawaab ku doofycuba
Waa waali dhakhso waalan
Kuma shaqayso manjaro uu
Ku jawaab Calaveran
Isbarbardhigan wuxuu udhaxeeyaa SRWare Iron iyo CHROME, maahan Chromium.
Waan isticmaalay kahor intaanan dib u dhigin
Ku jawaab yorch
hadda waa inaad noqotaa isbarbardhig
SRWare Birta iyo barafka
Ku jawaab papirrin
Browser cajiib ah. Runtu waxay la mid tahay chrome (Waxaa macquul ah inyar ka dhakhso badan). Kala duwanaanshaha isdhexgalka ayaa yar laakiin kuwa gudaha ayaa badan. Waxaan ku arkay maqaal * websaydhka oo sheegaya in aysan jirin sabab loo adeegsado biraawsarkan maadaama uu leeyahay shaqooyin la mid ah kan chrome oo ay ahayd inaan kaliya hawlgelinno (Maqaal aad u been abuur ah).
Mawduuca Rukia Kuchiki LXDM ee loogu talagalay waxyaabo kala duwan
Ku rakib oo isku xir mawduucyada SLiM